बाढी र पहिरोमा हाल सम्म १२८ जनाको मृत्यु,३३ जना बेपत्ता,२५ जना घाईते,१ लाखको उद्धार,हजारौं घर र लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा, बाढीले कुन जिल्लामा कति क्षति ! – HamroSamrachana
बाढी र पहिरोमा हाल सम्म १२८ जनाको मृत्यु,३३ जना बेपत्ता,२५ जना घाईते,१ लाखको उद्धार,हजारौं घर र लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा, बाढीले कुन जिल्लामा कति क्षति !
हाम्रो संरचना बुधबार, मंसिर २२, २०७८ 900 Views
१ भदौ, नेपालगञ्ज/ गत शुक्रबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले तराईका जिल्लाहरुमा पुर्‍याएको क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी छ । स्थानीय जिल्ला प्रशासनले क्षतिको विवरण धमाधम संकलन गरिरहेको छ । बाढी र पहिरोमा हाल सम्म १२८ जनाको मृत्यु,३३ जना बेपत्ता, २५ जना घाईते,१ लाखको उद्धार, हजारौं घर र लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय द्धारा बुधबार राती जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तीमा जनाएको छ ।
गृहमन्त्रालयको हाल सम्मको रिपोर्ट यस्तो छ
झापा जिल्लामा बाढीका कारण १२ जनाको मुत्यु भएको प्रारम्भिक तथ्यांक आएको छ । बाढीले बगाएर २ जना बेपत्ता छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले दिएको जानकारी अनुसार ‘अहिलेसम्म विस्थापित परिवार संख्या २५ सय पुगिसकेको छ,’तिवारीले भने, ‘यो संख्या अझै बढ्ने र तीन हजारको हाराहारीमा पुग्ने हामीले अनुमान गरेका छौं । जिल्लाको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको छ ।’
बाढीले झापा गाउँपालिका, गौरीगञ्ज नगरपालिका लगायतका दक्षिणी भेगमा बढी क्षति पुर्‍याएको छ । भर्खरै धान रोपिएको हुनाले बाढी र डुबानका कारण झापाको कृषि व्यवसायमा निकै ठूलो क्षति भएको छ । बाढीले झापा जिल्लामा पर्ने पूर्व-पश्चिम राजमार्गको पुल र सडकमा भने खासै क्षति पुर्‍याएको छैन ।
बाढी र डुवानका कारण जिल्लामा ३ हजार २ सय १ वटा निजी घरमा क्षति पुगेको प्रशासनले जनाएको छ । बाढीबाट जिल्लामा ११ हजार ४ सय २० परिवार विस्थापित भएका छन । मोरङमा डुवान भएका घरहरुको संख्या ८ हजार ५ सय पुगेको छ । रिपोर्ट आउने क्रम जारी रहेकाले क्षति भएका घर र विस्थापित हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।
मोरङको बेलबारी इलाका प्रहरी कार्यालयको ब्यारेकमा बाढीले क्षति पुगेको छ । प्रहरी चौकी कर्सियाको कम्पाउण्ड वालमा पनि क्षति पुगेको छ । बाढी र डुवानका कारण जिल्लाका केही सडकमा पनि क्षति पुगेको छ । रंगेली इलाका प्रहरी कार्यालयतर्फ जाने मुख्य सडक, भेडुवाथानको मुख्य सडक र विभिन्न स्थानका मुख्य तथा स्थानीय राजमार्गहरुमा आशिंक क्षति हुँदा सवारी साधन चलन गाह्रो भएको प्रशासनले जनाएको छ ।
दक्षिणी भेगको रंगेली नगरपालिका नजिकै बक्राहा खोलाको पुल दायाँ-वायाँ कटान भएकाले हलुका सवारी साधन मात्रै चल्ने अवस्था छ । बेलबारी ५ स्थित नहरको पुलमा क्षति पुगेको छ । बेलबारीको ४ र ५ नम्बर वडाको वीचमा रहेको लिम्बूचौक र सभापुर जोड्ने पुलमा पनि क्षति पुगेको छ । बिराटनगर-१९ स्थित सिंघिया खोलाको पुलमा पनि दायाँवायाँर तल्लोभागमा खोलाले कटान गरेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुनका न्यौपानेले भनिन्, विस्थापित भएका मध्ये धेरैको घर भत्किएको छ । धेरै टाटीका घर हुन्छन् । झण्डै ३ हजार त्यस्ता घरमा क्षति पुगेको अनुमान छ ।’ विस्थापित भएकाहरुलाई सार्वजनिक भवन, मठमन्दिरमा राखिएको छ । र, उद्योग बाणिज्य संघ लगायत विभिन्न संघ संस्थासँग समन्वय गरेर खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
जिल्लामा अहिलेसम्म ४ जनाको मृत्यु भएको प्रारम्भिक विवरण आएको छ । मृतक वालकको सदगति गर्ने ठाउँ नपाएर कोशीमा शव बगाइदिएको दर्दनाक दृश्य पनि यही सप्तरी जिल्लाकै हो । आइतबार साँझ खेत हेर्न गएका ब्रहमपुरका नथुनी राम-६५, लाई खोलाले बगायो । उनको शव सोमबार बिहान फेला परेको थियो । उनलाई तारकेला खोलामा आएको बाढीले बगाएको हो ।
जिल्लाको मिर्चैया, कल्याणपुर बर्साइन र सिराहाको इटारी, कर्जनहा आदि गाउँमा बढी क्षति पुगेको छ । लहानमा २० परिवार विस्थापित भएका छन् । सुदीपुरका ४० परिवार विस्थापित भएका छन् । बताहा र दलान खोलाको बाढी र कटानको समस्या बढी देखिएको छ । मुसहरलगायत दलित जातिले बढी क्षति बेहोर्नु परेको छ । खेतमै घर बनाएर बसेका कारण पनि उनीहरुका घरमा पानी भरिएको छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा सिरहामा बाढीको प्रकोप कम रहेको प्रजिअ श्रेष्ठले बताए ।
सर्लाहीमा बाढीबाट ७ जनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना वेपत्ता भएका छन् । तर, प्रभावितहरुको संख्या निकै ठूलो छ । कुल जनसंख्याको २०/२५ प्रतिशत अर्थात झण्डै २ लाख मानिस बाढीबाट प्रभावित भएको स्थानीय प्रशासनको आंकलन छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कणेलले भने, ‘पानी घटेको छ र, क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको छ ।’
सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद खरेलका अनुसार गरिब र पीछडिएको मानिसहरु बाढीबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ । सरकारी राहत पुर्‍याउनु पर्नेहरुको संख्या लाख बढी रहेको उनले बताए । विस्थापित भएकाहरुलाई सार्वजनिक भवन तथा खुला ठाउँमा त्रिपालमा राखिएको छ र, विभिन्न संघ संस्थाले ड्राइफुट दिएका छन् । कति घरमा क्षति पुग्यो वा भत्कियो भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । यसका लागि एक साता समय लाग्ने सीडीओ कणेलले बताए ।
बाराः ३ को मृत्यु, ७ सय घरमा पूर्ण क्षति
बाढीका कारण बारा जिल्लामा ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ जना वेपत्ता भएका छन् । प्रभावितहरुको संख्या ३ हजार बढी छ । जिल्लामा करिव ७०० घरमा पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ भने ११३० घरमा आंशिक क्षति भएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीले अनलाइनखबरसँग भने, कतिपय ठाउँमा सञ्चार सम्पर्क हुन सकेको थिएन, त्यसैले क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी छ ।’ बाढीबाट विस्थापित भएकाहरुलाई सार्वजनिक भवनहरुमा राखिएको छ र खानाको व्यवस्था गरिएको छ । केही पीडितहरु भने आफन्त कहाँ छन् ।
जिल्लाभरमा ६ लाख ८८ हजार २७ जना प्रभावित भएको स्थानीय प्रशासनको अनुमान छ । जसमध्ये १ लाख ६ हजार ९९५ घरधुरीलाई त्रिपाल चाहिने देखिएको प्रशासनले जनाएको छ । बुधबार फेरि पानी परेको छ, जसले सडक किनार र स्कुलमा पाल हालेर बसेकाहरुको विजोग भएको छ । ओत लाग्ने र खाना पकाउने ठाउँ समेत छैनन् । त्रिपाल र खानेकुराको बढी माग छ । केन्द्रबाट पठाएको राहत निकै अपर्याप्त भएको छ ।
बाढी पहिरोले यस वर्ष रुपन्देहीमा भने खासै धेरै क्षति नगरेको स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिएको छ । कोटही माईमा एउटा घर तत्कँदा १५ वर्षका किशोरको मृत्यु भएको छ भने उनका बुबाआमा दुबैजना घाइते बनेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले दिएको जानकारी अनुसार तिलोत्तमा नगरपालिकामा ७/ ८ वटा पक्कीघरहरु भत्किएका छन् । त्यहाँका पीडितहरु आफन्तकहाँ आश्रय लिएर बसिरहेका छन् ।
तर, जिल्लाबाट अन्यत्र जाने बाटोमा भने राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा जिल्ालबासीहरु पनि प्रभावित बनेको रेग्मीले बताए । नवलपरासीको दाउन्नेमा राजमार्ग भत्किँदा आवत जावतमा समस्या परेको उनले बताए । दाउन्नेको सडक मंगलबार बेलुका सुचारु भए पनि फेरि केही घण्टाका लागि आवागमन बन्द गरेर मर्मत भइरहेको उनले जानकारी दिए । रेग्मीका अनुसार बुटवलबाट पाल्पातर्फ जाने सडक शिद्धबाबा भन्ने स्थानमा पहिरोले पुरिँदा यातायात अवरुद्ध भएको थियो । पहिरो पन्छाएपछि त्यहाँको बाटो खुलिसकेको छ ।
मृत पाँचमध्ये तीनजना बबई नदीको बाढीमा परेका थिए । मृत्यु हुनेमा ठाकुर बाबा नगरपालिका ५ खोनपुरका ६० वर्षीय गोविन्द थारु र बारबर्दिया नगरपालिका १० गन्धर्व टोलका राजेन्द्र थारु छन् । एकजना महिलाको सनाखत हुन सकेको छैन । ठाकुरबाबा नगरपालिका २ मा घरको भित्ता भत्किएर ७० वर्षीय साहुनी थारुको मृत्यु भएको छ । गुलरिया नगरपालिका ३ संगमवस्तीका ५३ वर्षीय बलबहालुर सिंहको घरनजिकै नातामा डुवेर मृत्यु भएको हो ।
बर्दियामा बाढीका कारण ४ जना घाइते छन् । उनीहरुमध्ये एकको अवस्था चिन्ताजनक रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । डुवानका कारण करिव ५ हजार परिवार विस्थापित भएको र तीमध्ये केही बाढीको पानी घटेपछि घर फर्किसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ ।
यस वर्ष बबई नदीले बितण्डा मच्चाएको छ । बाढीमा परी नदी तटीय क्षेत्रका ठूलो भूभाग डुवानमा परेको छ भने डुवानका कारण बर्दियाको मुख्य वाली धानखेतीमा ठूलो असर परेको छ । बर्दियाका सडकहरुमा भने खासै क्षति पुगेको छैन । तर, बबई नदीेको पुल भासिँदा निकै ठूलो क्षति भएको छ । बर्दियामा पश्चिम राप्तीले यसवर्ष निकै ठूलो संख्यामा डुबान समस्या निम्त्याएको छ ।
बांकेमा ५ को मृत्यु, ४ जना बेपत्ता
बांके जिल्लामा बाढी पिडित तथा सडक यातायातमा समस्या भएकालाई स्थानिय दैबि प्रकोप उद्धार समिति तथा सयुक्त सरक्षा फौजको सक्रियतामा उद्धार तथा राहत दिने काम भइरहेको छ । राप्ती नदि तथा बांकेका बिभिन्न नालामा भएर बगेको पानीले ठुलो क्षती पनि पु–याएको छ ।
बिकास निर्माणमा संगठित भ्रष्टाचार गरी बिकास निर्माणमा कम गुणस्तरको मुल नहर निर्माण गरेको र बर्षेनी जनधनको क्षती पु–याउने कार्यको कचनापुर बासीले आक्रोश पोखेका छन । राप्ती सोनारी गाउंपालीकामा पर्ने उक्त ठाउंमा भर भत्कीयर ४ जनाको मुत्यू समेत भएको छ ।
आमा श्याम दुलारी, ३ बर्षिय सुनिता र ८ बर्षिय अञ्जलीको हात समायर नाला तर्दै थिइन, उक्त नाला तार्ने कदम अधुरै र–यो जब नालाले आमाको प्रेमलाई बुझन सकेन । खोलामा आएको बाढीले आमा सहित ३ जना लाई नै बगाएर क्षणभरमै बेपत्ता पारिदियो ।राप्तीपारी नरैनापुर गाउंपालीकाको नरैनापुर ६ कुदरवेटवा स्थित स्थानिय खोलामा गत मंगलबार सांझ खसेर ३ जना बेपत्ता भएको र खोजी कार्य जारी राखेको प्रहरीले जनाएको छ ।
भारतले नेपालको सिमा नजिकै निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बांधको समयमै सबै ढोका नखालेका कारणले राप्ती नदिमा आएको बाढीले जलमग्न भएको राप्ती तटीय क्षेत्रमा करोडौं बराबरको क्षती भउको छ भने त्यसको विवरण संकलन तथा राहतको लागी स्थानिय संयन्त्रहहरु प्रिचालित भएका छन । बांकेको राप्ती सोनारी, खजुरा, बैजनाथ,डुरुवा र न।ैनापुर गाउंपालीकाको बिभिन्न ठाउंमा ठुलो क्षती पु–याएको छ । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालीकाको वडा नम्बर २२ मा समेत बाढीले प्रभाबित पारेको छ ।
बाढीको कारणले बांकेको अगैया क्षेत्रका बिभिन्न ४ ठाउंमा राजमार्गमा क्षत्री पु–याएकोमा सडक मर्मत गदै गएकोमा सडक सुचारु गरिएको छ ।
सुर्खेतमा ३ को मृत्यु,
अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले सुर्खेतको गुर्भाकोटमा ३ जनाको परी पहिरोले पुरीका एकै घरका ३ जनाको मुत्यू भएको छ । जिल्लाहरुमा पुर्‍याएको क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी छ । स्थानीय जिल्ला प्रशासनले क्षतिको विवरण धमाधम संकलन गरिरहेको छ ।रण धमाधम संकलन गरिरहेको छ ।
दाङ मा ५ को मृत्यु,
दाङमा हालसम्म ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६४ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । विस्थापित परिवारलाई प्रहरीले सुरक्षित स्थानमा सारेको छ ।
बाढीपहिरोमा परी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १३ सिमगैरीकी ४८ वर्षीया भगवती सुनारलाई तुहीखोलाले बगाउँदा मृत्यु भएको हो ।
त्यस्तै, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– ४ का ५८ वर्षीय नरबहादुर रावतलाई पनि बेतनी खोलाले बगाएर बेपत्ता बनाएको र खोजतलास गर्ने क्रममा मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले जानकारी दिए । आइतबार घोराही उपमहानगरपालिका– १२ पेडागाउँकी ३३ वर्षीया निर्मला बाँठा मगरले हापुर खोला तर्ने क्रममा बगाएर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बाढी-पहिरोबाट विस्थापित दाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानका ८७ घर डुवानमा परी क्षति भएको र तीमध्ये ६४ घर परिवार र तिनको धनमाल सुरक्षित स्थानमा सारिएको जनाएको छ । प्रहरीले तुलसीपुर–अमिलिया सडकखण्ड, घोराही–होलेरी ९रोल्पा० सडकखण्ड, लमही–घोराही–तुलसीपुर सडकखण्ड, तुलसीपुर पश्चिम चिराघाट सडकखण्ड, घोराही उपमहानगरपालिका– १९ चिहानगैरामा पहिरो र रुख ढली यातायात अवरुद्ध भएकोमा स्थानीयवासी र सरोकारवालाहरुसँगको सक्रियतामा सडक खुलाएको छ ।
दाङमा बाढी पहिरोबाट डुबानमा परी ७० चौपायाको मृत्यु तथा बेपत्ता, १४०६ वटा पंक्षी ९कुखुरा०को क्षति भएको प्रहरीले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, १५०० भुरा माछा बाढीले बगाई क्षति पुराएको छ । बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रहरु दंगीशरण गाउँपालिका वडा नं। १, २, ६, ७, राजपुर गाउँपालिका वडा नं। ४ र ५, लमही नगरपालिका वडा नं। ९, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं। ७, ९, ११, १३, १५ र १६, घोराही उपमहानरपालिका वडा नं। ६, १०, ११ र १७ मा प्रहरी टोली खटिएर बाढीपहिरोबाट हुनसक्ने क्षतिको सम्बन्धमा सतर्कता अपनाउनुका साथै उद्धार कार्य जारी राखेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले सर्खेतको गुर्भाकोटमा ३ जनाको पपहिरोले पुरीउक मुतयू भउको छ । जिल्लाहरुमा पुर्‍याएको क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी छ । स्थानीय जिल्ला प्रशासनले क्षतिको विवरण धमाधम संकलन गरिरहेको छ ।
कैलालीको भजनी नगरपालिका–८ स्थित खैरा, कृष्णनगर, काडाढिक,सोनाफाटा, खल्ला, भ्रतनापुर, दैलेखि टोल, जनकपुर, बाहादुरपुर छछरुवामा अवरिल बर्षासंगै आएको बाढीले करीव १ हजार १ सय ५० घरधुरी पूर्ण रुपमा डुवानमा परेको छ ।
भजनी नगरपालिका–२ स्थित घरुवा, कटकानपुर, पल्टुपुर, मोहनपुर गरी ३ सय ४७ घर धुरी समेत पूर्ण रुपमा डुवानमा परेका छन् । भजनी नगरपालिका–६ नवलपुर, थापापुर, बिस्नापुर, बसाहा, खोदाउपुरमका करीव १ हजार घरधुरी आंकिश रुपमा डुवानमा परेकाले प्रभावितहरुलाई सुरक्षित स्थान हुलाकी राजमार्ग र अग्लो स्थानमा सारिएको छ ।
मांहाकाल गाउँपालिका–३ स्याङतान टोल बस्ने जय बहादुर स्याङतानको एकतले घर माथीबाट पहिरो आई पुरिदा पूर्णरुपमा क्षती भएको छ भने सोही ठाउँ बस्ने राम बहादुर स्याङतानको गोठ भत्केर पूर्णरुपमा क्षति भएको छ । पहिरोमा रामबहादुर स्याङतान र दिपक स्याङतानको घर समेत पूर्ण जोखिममा रहेको छ ।
माकुण्ड गाउँपालिका–२ स्थित रोशीटावामा पहिरो जाँदा श्याम कार्की लगायत ३ जनाको घर जग्गा जोखिम पूर्ण अवस्थामा रहेको छ ।
जोखिममा रहेका स्थानीयवासीलाई प्रहरीले सुरक्षीत स्थानमा सार्नुका साथै उद्धार कार्य गरिरहेको छ ।
पचरौता गाउँपालिका–९ बलढुसुवास्थित जानकी मन्दिरको बृद्ध आश्रमको कच्ची घरमा जमुनी खोलाको अविरल बर्षाको कारण शनिबार बाढी पस्दा आश्रममा बसेका ४ जनामध्ये ३ जनालाई उद्धार गरिएको छ भने आदर्श कोतवाल–९ बस्ने ७० वर्षीय ब्रम्हदेब महतो डुबेर बेपत्ता भएका छन् । उनको खोजी कार्य जारी रहेको छ ।
मध्यविन्दु नगरपालिका–१० अरुणखोलामा व्यापार गर्ने भारत ठुटीबारी बस्ने ५५ वर्षीय वल्ली चौहान स्थानीय अरुणखोला नदीले बगाई शुक्रबार बेपत्ता भएका छन् । सरावल गाउँपालिका ६ र ७ स्थित शनिबार परेको अबिरल बर्षाको कारण झरही खोलाको बहाव बढी प्रहरी चौकी भुजहवा सहित करीव १ सय २० घरहरू डुबानमा परका छन् । स्थानिय मानिसहरू सरसमान सहित सुरक्षित स्थानमा बसेका छन् ।
नवलपरासीकै बिनयीत्रिवेणी गाउँपालिका–६ र ७ शिवपुरगडीस्थित अबिरल बर्षाको कारण १२ घर डुबानमा परेको छन । यसैगरी नवलपरासीकै बर्दघाट नगरपालिकाको २, ४, ५, ६, ७, १० र ११ स्थानहरूमा अबिरल बर्षाको कारण गएराति बाढी आई घरहरू डुबानमा परेका छन् । हाल पानीको बहाव क्रमश घटदै गएको छ ।
दुईखोली गाउँपालिका–१ स्थित बगाउने खोलाले बगाई ल्याएको अवस्थामा सोही ठाउँ बस्ने ४५ वर्षीय चन्द्रबहादुर रोकाको शव शुक्रबार फेला परेका छ ।
केपीलासगढी गाउँपालिका–४ बस्ने मन्जुल राईको छोरा ७ वर्षीय रोबिन राई घरबाट हराएकोमा केपीलासगढी–५ स्थित तापखोलाले बगाई ल्याएको अवस्थामा शुक्रबार मृत फेला परेका छन् ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका–८ र ९ रामानन्दचोकस्थित खानेपानी कार्यालय लगाएत १४ वटा पसलहरु, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–३ स्थित ८ घर, गणेशमानचारनाथ–२ गंगापुरस्थित मुसहरि टोलमा २० घर, सबैला नगरपालिका–१२ स्थित टोकी र खैरबाना गाँउका ५० प्रतिसत घर, धनुषाधाम नगरपालिका–२ मखनबाबाकुट्टीस्थित ५० प्रतिशत घर बर्षाको कारण डुबानमा परेका छन् भने गणेशमानचारनाथ नगरपालिका–६ सखुवनिस्थित रक्ताही खोलाले गोदार चिसापानी सडकमा कल्भट बगाएको छ ।
साथै सोही ठाउँ बस्ने रासलाल यादवको फुसको घर, जनकपुर उपमहानरपालिका–२२ भमरपुराचोक बस्ने साबित्रीदेवी ठाकुरको कच्ची घर, मिथिला नगरपालिका–८ बस्ने ज्ञानबहादुर क्षेष्ठको २ वटा घर र सहिदनगर नगरपालिका–७ बस्ने मनोज मंडलको कच्ची घर भत्किएर क्षति भएको छ ।
माडी नगरपालिका–६ बसन्तपुरस्थित घरमा स्थानीय रिऊ खोलाको बाढी आई ५० घरमा पानी पसेको, माडी–१ स्थित कलवर्ड बाढीले बगाएको कारण माडीबाट चल्ने सवारीसाधन अबरोध भएको छ भने बसन्तपुरकै सत्यनारायण शाह, लक्ष्मण साह, बाहुन महततो, रिता महतोको घरका भाडावर्तन, अन्नपात लगायतका विभिन्न धनमाल बगाएर क्षति भएको छ ।
यसैगरी चितवनकै माडी नगरपालिका–१, २, ४ र ६ सम्मका बिभिन्न स्थानहरुमा अबिरल बर्षातको कारण गएराति रिउ खोला लगायत अन्य खोलाहरुमा पानीको वहाब बढी घरहरुमा पानी पसी डुबान भएको छ । माडी नगरपालिका–४ का २ घर जोखिममा रहेका छन् । सो स्थानका मानिसहरु सुरक्षित स्थानमा गई बसेका छन् ।